सुदृढीकरण कसरी लेख्ने? सुदृढीकरण भनेको के हो? यसको अर्थ के हो?
कसरी सुदृढीकरण लेख्न
सुदृढीकरण सही हिज्जे
मानिसहरु बीच सब भन्दा प्रभावकारी संचार विधि एक लेखन हो। यो सञ्चार र थेरापीको एक उत्तम तरिका दुबैलाई केहि बुझाउने र आत्म अभिव्यक्तिको लागि लेख्ने हो। तर लेख्ने क्रममा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू मध्ये यो यो बुझ्ने र चिल्लो हुन्छ।
शब्द लेख्नमा सब भन्दा साधारण गल्तीहरू मध्ये एक शब्द Pre मा गरिन्छ। यो एक धेरै भ्रामक लेख्ने टेकनीक हो। उदाहरण को लागी, (Prejudice) एक अलग शब्द हो, जबकि शब्द (Hunch) सँगसँगै लेखिएको छ। हिज्जे नियमहरू हाम्रो समयको प्रभावहरू अनुसार फरक हुन सक्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस्! यद्यपि दुबै उपसर्गयुक्त शब्दहरू हुन्, एक अलग लेखिएको छ र अर्को नजिकै।
मानवताले विगतदेखि अहिले सम्मका धेरै संचार विधिहरूको प्रयास गरेको छ। आज हामी टेलिफोन, टेलिभिजन र रेडियो जस्ता आविष्कारहरूको माध्यमबाट एक अर्कालाई जानकारी दिन सक्दछौं, लेखन, जुन मानवताको सब भन्दा पुरानो संचार उपकरण हो, अहिले पनि अप-टु-डेट छ र यसलाई सुरक्षित राखिएको छ जस्तो देखिन्छ।लेखन र लेखनबाट शुरू गरिएको इतिहास संसारको अन्त सम्म हाम्रो जीवनको एक हिस्सा हुनेछ।
सुदृढीकरण भनेको के हो?
सुदृढीकरण कसरी लेख्ने?
सुदृढीकरण हिज्जे गाइड
खुला एयर थियेटर
दाहिने हात र खुट्टा